Iibhakethi ezintathu zaBathethi beNtengiso yezeNtlalo | Martech Zone
NgoLwesithathu, Aprili 10, 2013 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Enjani yona ukumangalisa le veki ibiyiyo kwiNtengiso yeNtlalontle yeHlabathi! Ndimodareyitha iseshoni kubhloga lwequmrhu kunye UJustin Levy kwaye Iibhola zeWaynette. UJustin ukhokela ityala e Citrix yezicwangciso zabo zentlalo kunye nomxholo, kwaye uWaynette ukhokelela kuncedo lweenzame zesicwangciso somxholo se-SAS. Abantu ababini abamangalisayo abaqhuba izicwangciso ezinkulu ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo.
Ukusukela oko ndimodareyithayo, kuye kwafuneka ndithule kwaye ndibambelele kwimibuzo ephonononge izicwangciso ezisetyenziswe yimibutho yomibini ukukhulisa iinzame zabo zeshishini. Isenokuba yeyokuqala kum :). Ukugqwesa bekukuJustin noWaynette… kwaye ngelixa besebenza kumashishini amabini ahluke ngokupheleleyo, bekukho itoni yokufana kwimigaqo-nkqubo, izicwangciso, iinkqubo kunye nemilinganiselo ababeyibekile.
Eyona nto yayihlaziya kukuba khange bayenze Isandi njengesithethi esiPhakathi seendaba kwiNtlalo. Abazange bathethe izinto ezingathandekiyo ukubhala into oyithandayo, fumana indawo yakho, yenza nje okanye enye i-hippy kunye ne-theoretical crap esebenza kuphela ngaphakathi kwamaphepha encwadi ethengiswa kakhulu kwezentlalo nasengqondweni yomdali wayo.
Njengokuba eli shishini likhula, ndiqala ukubona ulwahlulo phakathi kolwazi, amava kunye nokuqonda kweenkokeli zentengiso yemidiya yoluntu. Ndiyakholelwa ukuba bawela kumabhakethi ama-3:
Abasebenzi -Izithethi ezabelana ngengqondo malunga neenzame zabo zobuqu zokuphuhlisa, ukwenza kunye nokuvavanya imikhankaso yemithombo yeendaba zentlalo ukugcina inkampani yabo inenzuzo kwaye ikhula. UJustin noWaynette yimizekelo emihle, kunye neenkokheli ezininzi zearhente kwisithuba.
Ithiyori -Ngabafo abenza amagama amatsha entengiso, babhale iincwadi kwaye bathethe ngethiyori ezingazange zavavanywa okanye kunqabile ukuba zivavanywe. Benza ingeniso enkulu kwintengiso yeencwadi, kwiintetho nakwezinye iindibano zokubonisana. Ngamanye amaxesha bayayila kwaye babonelele ngemibono emitsha kwiingxaki esele zikho-kodwa amaxesha amaninzi ingcebiso abayinikelayo ichaphazeleka.
abathengisi Ngelixa iiarhente zixhamla ngokuthetha kunye nokwabelana ngendlela abaziphucula ngayo iziphumo zabaxhasi, abazami ukuphumelela okanye bathengise ilungu labaphulaphuli ngokwenza umyalezo ojikeleze iqonga elithile. Ingxaki kubathengisi kukuba bonke balwela uhlahlo-lwabiwo mali omnye komnye kwaye bonke bakholelwa ukuba baliziko lendalo iphela. Ukuba ungumnikazi weqonga le-SEO, i-SEO yimpendulo. Ukuba ungumnikazi weqonga leMidiya yoLuntu, iMidiya yeNtlalontle yimpendulo. Ukuba ungumnikazi weqonga le-imeyile, imeyile yimpendulo.
Kwakukho ukulingana okuqinileyo kweebhakethi ezintathu kwiNtengiso yeNtlalontle yeHlabathi kwaye ndiziva ndililungelo lokuba sisithethi esifakwe amaxesha amaninzi. Ndiyakhathazeka, nangona kunjalo, kwezinye izehlo apho ndibona amabhakethi # 2 kunye # 3 egcwele umthwalo. Ndiyazi ukuba ndinomkhethe kuba singoochwephesha… kodwa njengokuba ndithetha nabazimaseyo, impendulo ihlala ifana… ingaba ndenza njani phumeza ezi ndlela.
Abazimaseyo abayi kwinkomfa ngaphandle kotyalomali… imali yomoya, ihotele, amatikiti, ukutya… olo lutyalo mali kubantu abaninzi abazimasa. Kubalulekile ukuba bayishiye inkomfa kunye nolwazi abaludingayo lokuqhubela phambili inkqubo yabo. Ndonwabile abantu kwi-Social Media Examiner babenobhalansi olunjalo kwiindlela zabo - ukuba wena bhalisela itikiti lokwenyani, uya kufumana ulwazi olufunayo! Ayizizo zonke iiseshoni ezenziweyo… kodwa ngaphezulu kokulingeneyo ukwenza ukuba kufaneleke!
Ndizifumana nditsiba iibhakethi ezi-2 kunye nezesi-3 kwaye ndicwangcisela ukuzimasa kwam ngebhakethi loku-1.
tags: arhenteogqirhaiiseshonismmwiinkokheli zemidiya yoluntuiindaba zentengiso yeendaba ezentlaloizithethi zemidiya yoluntuNdithathaNabathengisi
Iindlela ezintlanu zokuPhendula ngokuYila ukutshintsha i-SEO
Epreli 11, 2013 ngo-9: 22 AM
"Ukuba unayo iqonga le-SEO, i-SEO iyimpendulo. Ukuba ungumnikazi weqonga leMidiya yezeNtlalontle, iMidiya yokuPhendula iyimpendulo. Ukuba uneqonga le-imeyile, impendulo y-imeyile. ” Oku kuyinyani. Ndiyathetha, wonke umntu osebenzisa iqonga elithile ulisebenzisa ngesizathu (okanye) esithile. Nangona kunjalo, nangona esi sizathu (s) sisenokuba semthethweni kwaye sisekwe kwiimpikiswano eziyinyani, asizizo kwaye amanye amaqonga anokuba nezibonelelo ngokunjalo. Abantu kufuneka bajonge iingxaki kwiindlela ezahlukeneyo.